November | 2015 | AMAPHUPHO
By info on November 19, 2015 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi ujabulile kakhulu, kusho ukuthi kukhona ongakukhohlisa maduzane, ngakho kufanele uqaphele abantu obucabanga ukuthi ungabethemba. Uma ujabulile ngoba ugubha okuthile, kusho ukuthi uzophumelela kulokhu okwenzayo. Kungasho nokuthi uzoshada maduzane nje uma ujabule kakhulu.
By info on November 15, 2015 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi uyazala, kusho ukuthi uzobelethisa kalula uma ukhulelwe noma ushadile kodwa ukuthi kunenkathazo esendleleni uma ungakhulelwe. Uma uyindoda uphupha ukuthi uphathina wakho uyazala, kusho ukuthi ukhulelwe.
By info on November 10, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngombhede
Uma uphupha ukuthi usembhedeni, ukuthi okho kusho ukuthini kuya ngokuthi uwenzani. Uma uphupha nhe ngombhede ongenamuntu phakathi, izinkinga zakho zizophela maduzane. Uma uwendlala umbhede, uzothatha uhambo maduzane. Uma ulele embhedeni, uzoshada maduzane mawungashadile.
Amaphupho ngamaketango nezintambo
By info on November 3, 2015 in amaphupho nezincazelo, ngamaketango nezintambo
Uma uphupha ukuthi usebensiza amaketango noma izintambo, izinto ezikuhluphayo zizokushiya. Uzoba nempumelelo kodwa mhlawumbe kuzodingeka ukuthi usebenze khona izinto ezinhle zizokwenzeka. Uma kukhona amafindo kwiketango noma intambo, inhlanhla enhle uma ungakhipha ifindo kodwa uma ungakwazi yinhlanhla embi. Uma ungumuntu obophayo ifindo, kusho ukuthi ubudlelwane bakho kuzoba namandla.